eCommerce in Myanmar, Online Shopping Mall in Myanmar, Online Shopping in Myanmar, OnlineShopping in Myanmar | YayPanSar.com.mm
Yay Pann Sar
ဖုန်း နှင့် အပိုပစ္စည်းများ
Black Gold Gray White
Internet Features :
Website မှ ၀ယ်ယူသူများအတွက် ဝယ်ယူသည့်ပမာဏအလိုက် Cash Back များရှိပါသည်။
ဖုန်း နှင့် ဖုန်း Accessories မျိုးစုံ
ဝင်ရန် to comment
ရောင်းချသော ပစ္စည်းစုစုပေါင်း (278)
iPad Pro 4G
iPad Pro wifi
iPad Pro 4G(2017)
iPad Pro 4G (2017)
➀ ဘယ်လို ပစ္စည်းမှာရမှာလဲ?
Order မှာလိုသူများအနေဖြင့် ကိုယ်ဝယ်ယူမည် ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ကာ Website တွင် Order တင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သူငယ်ချင်း ချစ်သူများ အတွက် Surprise ပစ္စည်းပေးပို့လိုသူများအနေဖြင့် www.yaypansar.com.mm ၏ Order Form ရှိ မှတ်ချက်တွင် အသေးစိတ်ဖြည့်ပေးပါ။ သွားရောက် ပေးပို့ ရမည့် သူ၏ လိပ်စာ နှင့် Surprise လုပ်လိုသော သူ၏ အသေးစိတ်ကို ဖြည့်ပေးပါ။ ပေးပို့ရမည့် အချိန်ကိုပါ အသေးစိတ် ဖြည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Suprise လုပ်လိုသူများ အနေဖြင့် ရေးပေးစေချင်သော Message ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် ဖုန်းဆက်ရမည့် အချိန် စသည်တို့ကို အသေးစိတ် ဖြည့်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ YayPanSar မှ Postcard မျာပြင်ဆင်ပေးကာ ပေးပို့သွားပါ့မယ်။
➁ပို့ဆောင်ခတွေက ကော ဈေးကြီးလား?
ပစ္စည်းများကို အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ တွင်းနှင့် နယ်မြို့များအတွက် Delivery နှုန်းထား ကို (နှစ်ထောင်) ကျပ် အဖြစ်သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ နယ်မြို့အတွက် တန်ဆာခကို မှာယူသူမှ ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ပစ္စည်းများကို Website မှမှာယူပါက Cashback ၁၀၀၀ ကျပ် ပြန်ပေးပါတယ်။ YayPanSar.com.mm ၏ Facebook Fan Page မှမှာယူပါက အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ 1) မှာယူမဲ့ ပစ္စည်း ၏ အမည်နှင့်ပုံ 2) မှာယူသူနာမည် 3) လိပ်စာ (နယ်မှဖြစ်ပါက ကားဂိတ်အမည် အတိအကျ) 4) ဖုန်းနံပါတ် 5) ပို့ရမည့် အချိန် (ရန်ကုန်မြို့တွင်းအတွက်သာ)
➂ ပိုက်ဆံကို အိမ်ရောက်မှာ ပေးရမှာလား (သို့) နယ်ကမှာရင်ကော?
ရန်ကုန်မှ Order မှာယူသူများအနေဖြင့် ပစ္စည်း အိမ်ရောက်မှ ငွေးပေးချေ မှုကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နယ်မှ မှာယူသူများ အနေဖြင့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးများကို YayPanSar ၏ ဘဏ်အကောင့် နံပါတ် >> AYA Bank (Saving) 0063201010034881 << (သို့မဟုတ်) >> KBZ Account Number (Saving) 124-301-99931845601 << သို့လည်း ငွေများ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Bank account အတွင်း ငွေဝင်မှသာ ပစ္စည်းမှာယူခြင်းကို အတည်ပြုမည် ဖြစ်ပြီး မှာယူမှုကို ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်း Order များ နေ့ခင်း (၁) နာရီ တွင် ပိတ်ပါသည်။ Order မပိတ်ခင် မှာယူသူများ ကို ရန်ကုန်မြို့ တွင်း နေ့ခြင်း ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး နယ်မြို့ များအတွက် ကားဂိတ်များသို့ နေတွင်းခြင်း ပို့ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
နေ့ခင်း (၁) နာရီ နောက်ပိုင်း မှာယူသော ပစ္စည်းများအနေဖြင့် နောက်တနေ့ မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်း (သို့မဟုတ်) ကားဂိတ်သို့ ပစ္စည်းရောက်ပါမည်။
ဈေးဝယ်ခြင်း ကို အချိန်အရွေး နေရာမရွေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
Download from :
Hotline - 450 88000 1, 450 88000 2, 450 88000 3
Made with all thefrom YayPanSar.Copyright© 2016
Landing Zero Theme
A free, responsive landing page theme built by BootstrapZero.
This isasingle-page Bootstrap template withasleek dark/grey color scheme, accent color and smooth scrolling. There are vertical content sections with subtle animations that are activated when scrolled into view using the jQuery WOW plugin. There is alsoagallery with modals that work nicely to showcase your work portfolio. Other features includeacontact form, email subscribe form, multi-column footer. Uses Questrial Google Font and Ionicons.
Download at BootstrapZero
You clicked the button, but it doesn't actually go anywhere because this is onlyademo.
Learn more at BootstrapZero